Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbax lagu horqabtay aqalka dawladda -State Capital building- ee Minnesota
Banaanbax lagu horqabtay aqalka dawladda -State Capital building- ee Minnesota
Mudaharaad balaadhan oo ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen Ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda Ogaadeeniya (OYSU) Iyo Jaaliyada Ogaadeeniya ee gobolka Minneasota ayaa maanta kadhacay Aqalka Cad ee looga taliyo gobolka Minneasota ee loo yaqaano State Capital building.
Mudaharaadkan oo ay ujeedadiisu ahayd sidii indhaha caalamka loogu soo jeedinlahaa xasuuqa ay Itoobiya kawado gobolka Ogaadeniya ayaa waxaa kasoo qaybgaley dadweyne aad u farabadan oo ay wajigooda kamuuqato xamaasad iyo murugo badan. dadweynihii mudaharaadayey ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo kadhan ah dowlada Itoobiya iyo gabood falada foosha xun ee ay kawada gobolka Ogaadeeniya.
Waxay sidoo kale dadku ka mudaharaadayeen heshiiska been abuurka ah ee ay Itoobiya la gashay shirkahada Shiina ah ee ku saab inay shidaal ka qodaan Ogaadeeniya arintaas oo ay shacabka reer Ogaadeeniya cadho badan kamuujiyeen shirkadaha shiina ah ee isku dayaya in ay bililiqaystaan shidaalka Ogaadeeniya. Mudaharaadkan kaliya kuma koobneyn gobolka Minneasota ee waxaa kale oo uu mudaharaadkan mid lamida lagu qabtay gobolo badan oo kamid ah gobolada maraynkan sida;
Loss angels California
Ugu dambeyntiina mudaharaadkan oo ahaa mid in badan laga soo shaqeynayey gobolo badana iskumaalin laga qabtay ayaa u dhacay si aad iyo aad u heersaraysa iyada oo ay meeshaas joogeen inta badanba warbaahinta ama Media gobola kaladuwan ee uu mudaharaadku dhacay maanta. Waqooyiga maraykanka oo ay ku noolyihiin jaaliyadaha ugu balaadhan ee ka soo jeeda bogolka Ogaadeeni ee kudhaqan qurbaha ayaa qabanqaabinaya in ay qabtaan mudaharaadyo kan lamid ah oo siwada jir ah looqabto mustaqbalka dhow.
maashaa allaah, ilaahay khayr ha idin siiyo, habeenkaa xortaa dhawaadey.
guulaysta sii giijiya.